युवाका 'कुरा मीठा, काम झुर'
Saturday, 16 June 2012 08:30	नागरिक
बसन्त बस्नेत, काठमाडौं- लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थिरताका लागि हरेक १० वर्षमा आन्दोलन हुँदै आएका छन्। राजनीतिक संकट गहिरिएका बेला नयाँ पुस्ताले नेतृत्वको पालो पनि माग्ने गरेको छ। संविधान नबनाई संविधानसभाको मृत्यु हुनुका पछाडि शीर्ष नेतृत्वको मात्र दोष छ कि युवाहरू पनि त्यसका हिस्सेदार हुन्?
यिनै विषयबारे छलफल गर्न यसै साता माओवादीका लोकेन्द्र विष्ट, कांग्रेसका गगन थापा, एमालेका रविन्द्र अधिकारीलगायत युवा नेता एकठाउँ उपस्थित थिए। एक सहभागीले उनीहरूलाई लक्ष्य गरे, 'परिवर्तनका बाहकहरूले नै परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संविधान बनेन, लोकतन्त्र पनि संस्थागत भएन।'
निवर्तमान 'माननीयहरू'ले यसको जवाफ त्यहाँ फर्काएनन्। बरु संविधानसभाका विषयगत समितिहरूमा बसेर असाध्यै मेहनतले गरेका काम शीर्ष नेतृत्वकै कारण व्यर्थ हुन पुगेकामा उनीहरूमा आक्रोश झल्कन्थ्यो। माओवादीका विष्ट कड्किए पनि, 'हामी युवाहरू विषयगत समितिमा सक्रिय भएर यति धेरै काम गर्‍यौं, ठूला नेताहरूले यतिन्जेल के हेरे?'
संसद नरहे पनि संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार भेटिएका एमाले नेता अधिकारीले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसकेको सकारे। 'संविधान दिन नसकेकामा अघिल्लो पुस्तालाई त लज्जा नै छैन,' उनले नागरिकसँग भने, 'तर नयाँ पुस्ताले लाज मान्नुपर्छ।'
कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्मा अधिकारीको भनाइसँग सहमत छन्। 'संविधानका इस्युमा युवाहरूलाई भूमिकाविहीन गराइएको साँचो हो, तर युवाले सक्रिय हस्तक्षेप गरेको खोइ?' उनले भने, 'गणतन्त्र र संविधानसभाका लागि पहिलो पंक्तिमा उभिएको युवा नेतृत्व यसपालिको संकटका बेला रमिते मात्रै बन्यो।'
अहिलेको पुस्तामा राजनीतिक आदर्श, मूल्य र विचार हराउँदै गएको एक नेताले टिप्पणी गरे। 'पछिल्ला नयाँ भनिएका अधिकांश भोगवादी छन्, तिनमा पदको लोभ सवार छ,' उनले भने,
साइजका आधारमा कसैको बढी, कसैको कम दोष भए पनि कोही पानीमाथि नरहेको उनको भनाइ छ। शीर्ष नेतृत्वले छिनछिनमा अडान फेर्ने र अडानका नाममा यथास्थितिवादी भइदिएकाले नै संविधानसभा अवसान हुन पुगेको उनको ठहर छ।
ठूला दलमा २००७ सालभन्दा अघि नबढ्ने सोचको सिकार नयाँ पुस्तासमेत हुन पुगेको पत्रकार झलक सुवेदीको तर्क छ। 'राष्ट्रका यति ठूला मुद्दा सम्बोधन गर्नसक्ने संविधानसभालाई गाउँको खानेपानी समिति बनाएझैं गरी चलाउन खोज्यो नेतृत्वले,' उनले भने। सुवेदीले औंल्याएको कमजोरीको दोष भने युवाहरूलाई नै दिन चाहन्छन् कांग्रेस नेता शर्मा। 'पहिले त्यत्तिकै समय बिताए, जेठ १४ गते राति दुर्घटना भएको देखे, अनि ड्राइभर गलत थिए, अब हामीले पाउनुपर्‍यो भन्न मिल्छ?'
कैयौं पटक मौका पाए पनि पुरानो नेतृत्वले योग्यता प्रमाणित गर्न नसकेको समान बुझाइ छ एमालेका अधिकारी र कांग्रेसका शर्माको। तर अनुहार हेरेकै भरमा, कपाल कालो भएकै आधारमा नयाँलाई छाड्न तयार पनि नभएको उनीहरू बताउँछन्। 'भेन्टिलेटरमा बसिन्जेल पनि पद नछाड्ने प्रवृत्तिको नेतृत्वको विकल्प दिन नसक्नुको दोषी युवा पनि हुन्,' अधिकारीले भने, 'पुरानो नेतृत्व असफल भएकै हो, तर आफैंअघिल्तिर आएको संकटसमेत थाहा नपाउने हाम्रो पुस्तालाई चाहिँ कसरी सक्षम भनिहाल्ने?'
शर्माले ग्रामीण सन्दर्भलाई वर्तमान राजनीतिसँग जोडे। 'बरु घरको गारो गिरोस्, छाना चुहियोस्, तर छोरो भैंसी दुहुन नजान्दासम्मम बाउले कहाँ तालाचाबी सुम्पिहाल्छ र!' शर्माले भने, 'त्यसैले आफूलाई सावित नगरी पालो पाइएन भनेर हतास हुनुको र मेरो पालो आइसक्यो भनी फुर्किनुको तुक छैन।'
'६०१ सभासदमा अधिकांश युवा नै होलान्, तर पार्टीका दुईचार जना जर्नेल कर्नेलले संविधान दिन चाहेनन्,' स्तम्भकार सिके लालले मार्टिन चौतारीमा भने।
लालका अनुसार संविधानसभा केवल काठको घर थियो, भत्कियो। 'घर भत्के पनि त्यहाँका थु्रपै खाँबा, सामान काम लाग्छन्,' उनले भने, 'त्यसैले संविधानसभाका उपलब्धि जोगाएर अघि बढ्नु युवाहरूको जिम्मेवारी हो।'
एमाले नेता अधिकारी पनि युवा नेतृत्वभित्र नयाँ भूमिकाको खोजीमा छन्। 'सधैं एउटै आदर्शले कहाँ चल्छ? निरंकुशताका बेला जेल बस्नु आदर्श हो, लोकतन्त्रको बेला हो र?' उनले भने, 'यो बेला त आम जनता परिचालित गरेर समृद्धिको संस्कृति पो बसाल्नुपर्थ्यो।'
युवा नेताहरू ठान्छन्- निराशा समस्याको समाधान भने होइन, यसले गलाउँछ, समाप्त पार्छ। 'बहुदलीय व्यवस्था समाप्त पारिएका बेला पनि चरम निराशा थियो, ०६२/६३ सालको आन्दोलनले उत्साह ल्यायो,' अधिकारी सम्झन्छन्, 'अब कहिल्यै लड्नु नपर्ने गरी आन्दोलन गरिन्छ भनेको, पाँच वर्ष नबित्दै उही ठाउँमा झर्‍यो।
माओवादीका विष्ट पनि नेतृत्वसँग हैरान छन्। नेतृत्वले कतिपय अवस्थामा सही निर्णय लिन नसक्नुको अपजस आफूहरूले भोग्नुपरेको र कमसल कुरालाई पनि सही मान्दै हिँड्नुपरेको उनले सुनाए। 'होइन, के अहिलेको पुस्ता ठूला नेताको गोठालो हो?' उनले आक्रोश पोखे।
युवा नेतृत्वले सर्वसाधारणको आकर्षण छिट्टै पाउँछ किनकि उनीहरूसँग सपना हुन्छ। कसरी रोजगारी व्यापक सिर्जना गर्ने, आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने आदि विषयमा पार्टीमा छलफल चलाउन प्रयत्न गरेको अधिकारीले दाबी गरे। 'तर पार्टीका शीर्ष नेता यस्ता कुरा बु‰दैनन्, उनीहरू केवल प्रधानमन्त्री कसरी हटाउने, आफू कसरी हुने, चुनाव कसरी जित्ने यस्ता कुरामात्रै बुझ्छन्,' उनले दुखेसो गरे।
पुरानो नेतृत्व असफल भएको भन्ने अधिकारीको भनाइमा कांग्रेस नेता शर्मा फरक मत राख्दैनन्। तर दोषको अनुपात भने बराबर नभएको उनले तर्क गरे। 'शान्ति सम्झौतामा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै हस्ताक्षर गरेको प्रचण्डले होइन?' 'त्यसैले अहिलेको अवस्था आउनुको बढी दोष उनले नेतृत्व गरेको माओवादीले लिनुपर्छ कि पर्दैन?'
नेताहरूलाई सार्वजनिक मञ्चहरूमा थर्काउँदैमा युवा नेतृत्वको औचित्य पुष्टि नहुने सकार्छन्, अहिलेका नेताहरू। 'जति गुणदोष देखिए पनि अबको बाटो अघि बढ्ने यही पुस्ताले नै हो,' छलफलका एक सहभागीले बताए। नागरिकसँगको कुराकानीमा एमालेका अधिकारीले आफ्नो पुस्तालाई कटाक्ष भने गर्न बाँकी राखेनन्। 'नयाँ पुस्ता भनेर मात्रै हुँदैन,'धेरै युवा नेता भनिनेका कुरा मिठा छन्, व्यवहारचाहिँ झुर।'
उनले बोलेको पछिल्लो पंक्ति अर्थपूर्ण थियो- आफ्नो परिवारमा पनि चेन्ज ल्याउन नसक्नेले देशमा चेन्ज ल्याउँछु भन्नु पत्यारिलो छैन।